I-Malaia garnet, evela eKenya / i-pyralspite ene-calcium / i-video encane
I-Malaia garnet, evela eKenya
Amathegi I-Malaia garnet
Malaia garnet noma Malaya garnet kuyinto gemological igama varietal ngoba ukukhanya ebumnyameni orange kancane Pinkish, orange ngokubomvu, noma aphuzi orange garnet, ukuthi kukhona ingxube ngaphakathi pyralspite uchungechunge pyrope, almandine, futhi spessartine nge-calcium kancane. Igama elithi Malaia lihunyushwa kusuka eSwahili ukuze lisho, "ongenawo umndeni". Itholakala empumalanga ye-Africa, eMba Valley emngceleni weTanzania neKenya.
Izinhlobo ze-Garnet zitholakala emibala eminingi ehlanganisa obomvu, i-orange, ophuzi, obuluhlaza, obomvu, obomvu, obuluhlaza, omnyama, obomvu, ongenakubala, obomvu obomvu obuvame kakhulu.
Isampula esibonisa umbala obomvu garnet ingaveza.
Izinhlobo ze-Garnet 'zokudlulisa ukukhanya zikwazi ukuvela ezinhlobonhlobo zamatshe ezinamabala obala ezinhlobonhlobo ze-opaque esetshenziselwa izinhloso zezimboni njengabrasives. I-luster ye-luster ihlukaniswe njenge-vitreous (i-glass-like) noma i-resinous (i-amber-like).
Amagarnethi ayizinsizakalo ezinefomula jikelele X3Y2 (Uma i-O4) i-3. I-X indawo ivame ukuhlala ngama-diationent cations (Ca, Mg, Fe, Mn) i-2 + kanye ne-Y nge-cations ngamakhompiyutha (Al, Fe, Cr) 3 + ohlakeni lwe-octahedral / tettrahedral ne-SiO4] 4- ethatha i-tetrahedra. Amagarnethi avame ukutholakala kumkhuba we-codhedal crystal, kodwa futhi avame ukutholakala nomkhuba we-trapezohedron. (Qaphela: igama elithi "trapezohedron" elisetshenziselwa lapha nasematheksthini amaningi amaminerali libhekisela ekujuleni okubizwa ngokuthi i-icotetrahedron e-Deltoidal ejometri eliqinile.) Bakhaza ngaphakathi ohlelweni lwe-cubic, banezinselele ezintathu ezilingana nobude obulingana nomunye nomunye . Amagarnethi awabonisi ukuhlanza, ngakho-ke uma bephuka ngaphansi kokucindezeleka, izingcezu ezingavamile ezingakhiwe zakhiwa (conchoidal).
Ngenxa yokuthi ukwakheka kwamakhemikhali we-garnet kuyahluka, izibopho ze-athomu ezinhlotsheni ezithile zinamandla kunezinye. Ngenxa yalokho, leli qembu lamaminerali likhombisa ububanzi obunzima kumkhawulo we-Mohs we-6.5 kuya ku-7.5. Izinhlobo ezinzima ezinjenge-almandine zivame ukusetshenziselwa izinhloso ezimbi.